Mashaariicda horumarineed ka socta degmada Dhagax-madaw. - Hargeele - Wararka Somali State
Mashaariicda horumarineed ka socta degmada Dhagax-madaw.
November 2, 2019 566
Mashaariicaha ay xukuumadu ka wado degmada dhagax madaw ee laga fulinayo heer degaan islamarkaana lagu wada in dhawaan la soo gabagabeeyo ayaa waxaa ka mid ah:- Mashruuca wadada isku xidha dhagaxbuur iyo dhagax madaw oo ay ku baxayso lacag ka badan 72milion oo uu fulinayo xafiiska gaadiidka iyo jidadka DDS.
Mashruuca ugu muhiimsan oo ah, biyo xidheen ay ku baxayso lacag dhan 60 milion oo laga qodayo duleedka magaalada dhagax madaw xafiiska horumarinka khayraadka biyaha ayaa fulinaya, sidoo Ceelbiyood laga qodayo duleedka degmada oo looga biyo galinayo magaalada islamarkaana lagu xoojinayo ceelkii hore ee degmadu ka cabijirtay biyaha oo ay ku baxayso lacag dhan 6milion kaasina uu fulinayo kharyaadka biyaha.
Waxaa kale oo jira ceelbiyood ay qoday hay’ada OXFOM oo laga qoday tuulada kuus-cawl kaasi oo biyo galin loogu samaynayo tuuladaasi waxaana ku baxaysa aduun lacageed oo dhan 7 milion.
waxaan kada ka dib idiin soo gudbin doonaa mashaariicaha ka socda degmooyinka deegaanka .
Wasiir Maareeye”DFS waxaa ka go’an ilaalinta badqabka Saxafiga iyo Saxaafadda Soomaaliyeed”
Waftigii uu hogaaninayay madaxwaynaha DDS oo dib ugu soo noqday deegaanka.
Mashruuca LLRP kulan looga hadlayo.